Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaad ka dhacay Degmada Fiiq kadib gabadh lagu kufsaday Magaladaas waxaana ku dhintay odey da’ah mudaharaadkaas.
Mudaharaad ka dhacay Degmada Fiiq kadib gabadh lagu kufsaday Magaladaas waxaana ku dhintay odey da’ah mudaharaadkaas.
Mudaharaad laba maalmood socday oo ka dhacay Fiiq
23 iyo 24 bishan Febraayo 2012 waxa uu mudaharaad ka dhacay degamada Fiiq ee magaalo madaxda Gobolka Nogbeed. Sababta mudaharaadkan ayaa lagu sheegay inay ahayd fal fara xumayn ah oo ka dhacay badhtamaha magaalada waqti maalinimo ah, kaas oo ay dadkii arkayay dhacdadaas si wayn uga xumaadeen ,kana gadoodeen, hasayeeshee wali nama soo gaadhin magaca gabadhaasi dhibkaa loo gaystay
Mudaharaadkan oo socday laba maalmood ayaa inta la ogayahy waxaa ku dhintay nin waayeel ah oo ka mid ahaa dadkii sida wayn uga dhexmuuqday oo lagu magacabi jiraya ALLE ha u Naxariistee marxuum Nuuriye, dhacadadan ayaa si way u badashay dareenka dadkii arkayay.
Sida la ogyahay kufsiga, xasuuqa dhaca iyo waxyeelaynta shacabka ogaadeenya ay u gaystaan ciidamada cadawgu waa mid joogto ah. Hase yeeshee tani waxay kaga duwan tahay goobta ay ka dhacday oo ah goob suuq ah iyo goorta ay dhacaday oo ah waqti maalin ah. taasina waxay keentay in ay adkaysan waayaan dadkii hortooda falka lagu samaynayay, sidaana uu ku bilawday mudaharaadku .
Guud ahaan dhibaatooyinkan ayaa waxay xidhiidh la leeyihiin argagaxa lagu hayo shacabka ogaadeenya sida kii dhawaan ka dhacay gunagado , abshir iyo qaxii deegaanada wargaadsan , boodhlay iyo meelo kale oo kamid ah Ogadeniya.